Diblomaasiyiin ka socota Mareykanka, Britain,Faransiiska iyo Jarmalka oo shir looga hadlayo heshiiskii Niyukleerka Iran ee ku yelanaya Paris | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Diblomaasiyiin ka socota Mareykanka, Britain,Faransiiska iyo Jarmalka oo shir looga hadlayo heshiiskii...
Diblomaasiyiin ka socota Mareykanka, Britain,Faransiiska iyo Jarmalka oo shir looga hadlayo heshiiskii Niyukleerka Iran ee ku yelanaya Paris
Diblomaasiyiin sarsare oo ka kala socota Mareykanka, Britain,Faransiiska iyo Jarmalka ayaa lagu wadaa in ay maanta shir isugu yimaadaan magaalada Paris si dib loogu soo nooleeyo heshiiskii Niyukleerka Iran ee 2015-kii.
Wadahadallada ayaa ku soo beegmaya iyadoo toddobaad uun ay ka harsantahay xilligii kama dambeysta ahaa ee ay Iran qabsatay in looga qaado cunaqabateynada ka hor inta aysan ka bixin heshiiskii niyukleerka ee ay la galeen waddamada reer galbeedka sannadka markuu ahaa 2015-kii.
Waqtiga ayaa si xawli ah usocdo waxayna dalalkan ku raja weyn yihiin inay xal u helaan mudddadaasi yar ee ka hartay xilliga ay Iran ku hanjabtay inay ka baxayso heshiiska.
Heshiiskan 2015-kii ayaa loo arkayay inuu yahay hormar dhanka siyaasadda ah oo uu sameeyay maamulkii madaxweynihii hore Mareykanka Barack Obama
Waxaa looga gol lahaa in lagu xakameeyo hormarinta Niyukleerka Iran oo xawli ku socday, waxaana Iran lagu qanciyay si ay u joojiso tallaabooyinkaasi in laga qaadayo cunaqabateenada caalamiga ah ee saarnaa, hase yeeshee 3 sannadood ka hor ayuu madaxweynihii hore ee Mareykanka Donadld Trump ku dhawaaqay in Mareykanka uu ka baxay heshiiskaasi.
Markaasi ka dib ayay xukuumadda Washington waxay Iran ku soo rogtay cunanqabateeno haatanse madaxweynaha cusub ee Mareykanka ee Joe Biden ayaa wacad ku maray inuu dib ugu biirayo heshiiskii 2015-kii ee Niyukleerka Iran inkastoo ay suurogal tahay in laga daahay.
Dowladda Iran ayaa si joogta ah u jabineysay heshiisyadaasi iyado casriyeeyneysay bacriminta maadada Uraniumka ee niyukleekeeda.
Dhanka kale xiisadda u dhaxeysa Mareykanka iyo Iraan ayaa cirka isku shareertay ka dib markii ay Mareykanka dileen Janaraal Qasem Soleimani, oo ahaa abaanduulihii xoogagga Quds.
Taasi baddelkeedana, madaxweynaha cusub Joe Biden ayaa caddeeyay in Mareykanku uu doonayo sidii uu dib ugu noqon lahaa heshiiskii nuclear-ka Iiraan ee la saxiixay sanadkii 2015-kii, kaasoo micnihiisa uu noqon karo in laga noqdo go’aankii cunaqabateynta loogu soo rogay Iiraan, sidoo kalena la fasaxo lacagaha Tehran ka xayiran si taas baddalkeeda ay iyaguna heshiiska ugu hoggaansamaan.
Warar bishii November ee sanadkii la soo dhaafay kasoo baxay magaalada Washington ayaa sheegayay in madaxweynihii hore ee Mareykanka uu weerarro waaweyn la beegsan doono ka hor inta aysan la hadlin la taliyeyaashiisa oo ku boorriyay in uusan tallaabo noocaas ah qaadin.
Previous articleKaaliyaha Xoghayaha-Guud ee Qaramada Midoobay Somaliya oo sheegtay ‘in lama huraan tahay’ ay tahay in xal kama dambeys ah laga gaaro is-mari-waaga doorashada
Next articleWar deg deg ah Midoowga Musharaxiinta oo gaadi ka cayaar ku soo maray Daljurka Daahsoon oi Bari ka dhacay Banaanbaxa
Degdeg -Ururka Alshabaab ayaa sheegay in ay dhawaan baahin doonaan Documentary film lix qaybood ah, kaasi oo ay kaga hadlayaan falanqeyn ay ku sameyn...